Home Somali News Somaliland: Ciidanka Booliska Oo Hargeisa ku Dhaawacay Wiil Dhalinyaro Ah
Axmed Maxamed Saxardiid, oo ah wiil da’diisu yar tahay ayaa ku dhaawacmay rasaas Boolisku riday Isniintii kadib markii Xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ciyaal isku shiideen.
Ciidanka oo isku dayaya inay kala kaxeeyaan kooxaha dhalinyarada ah oo xaafaddaasi isku dhagax tuuray ayaa rasaastoodu sababtay dhaawaca wiilkan yar. Ciyaalka oo laba kooxood u kala safnaa ayaa xaafadda rabshay, kadib waxaa halkaasi gaadhay booliska.
Wiilkan yar ayaa hadda xaaladdiisa lagula tacaalayaa cisbitaalka Hargeysa, waxaanay rasaastu ka haleeshay Madaxa iyo gacanta. Dhinaca kale Marjiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca ciidammada ammaanka oo la xidhiidha dhacdadan shalay.
hase yeeshee waxa ay dhacdadani ku soo beegmaysaa xilli ay toddobaadkan uu geeriyooday wiil yar oo maxbuus ku ahaa saldhiga Ibraahim Koodbuur kaas oo askarigii heeganka ku jiray ku riday rasaas uu markii dembe u geeriyooday.
Sidoo kalena rabshad toddobaadkii hore dhimasho iyo dhaawac sababtay oo ciidammada ammaanku ku gelalafeen qoys degan xaafadda Jigjiga yar ayaa wiil yar oo aan toban jir gaadhini u geeriyooday rasaas foolka hore [wejiga] kaga dhacday, halka qaar kale oo qoyska ka tirsanaa ay iyaguna hadda dhaawac u jiifaan.
Booliska ayaa muddooyinkii u dambeeyay wajahayay dhaliilo bulshada iyo mucaaradka kaga imanaya oo ku aadan in rabshad kasta amma meel kasta oo ay xalkeeda galaan dhaawac amma dhimasho keento.